मृ तक सोनिहाङ्गमाको गोप्य भ्वाईस रेकर्डः मृ त्युअघि साथीसंग गरिएको कुराकानी र अडियोमा यस्तो ! – PathivaraOnline
Home > भिडियो > मृ तक सोनिहाङ्गमाको गोप्य भ्वाईस रेकर्डः मृ त्युअघि साथीसंग गरिएको कुराकानी र अडियोमा यस्तो !
admin September 12, 2020 September 12, 2020 भिडियो, समाचार, समाज	0
धरान । धरान ११ की २२ बर्षीया सोनीहाङ्मा लिम्बुको ह त्या भएको दाबी गर्दै माइती पक्षले थप अ नुसन्धानका लागि कानुनि प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेका छन। सुरुमा उनले आ त्मह त्या गरेको भनीए पनि मृ तक सोनीको परिवारले मृ त्यु शं कास्पद भएको बताउँदै मंगलबार इलाका प्रहरी कार्यालयमा जा हेरी दिएका थिए । माइती पक्ष भन्छन – ‘हामीलाई सोनिको कुन समयमा मृ त्यु भयो त्यो समेत थाहा थिएन ।
सोमबार दिउँसो करीब १२ बजेको समयमा सोनिको वुवालाई छोरीले झु ण्डिएर आ त्मह त्या गरेको खबर आयो ।’ उनले भने, ‘हामी तुरून्त धरान आइपुग्दा रातीको ११ बजेको थियो । सोमबार राती मात्र आइपुगेकोले गर्दा मंगलबार विहान मात्र श व हेर्ने र बुझ्ने काम भयो ।’
मृ तकका माइती पक्षले जाहेरी दिएपछि गत बुधबार केटाको बुवा ६१ वर्षीय भीम माबो, केटाको दुई दिदी २८ बर्षीया सन्जु माबो र २५ बर्षीया विमला माबो र केटाको भाई २० वर्षीय हेमकुमार माबोलाई पक्राउ गरेको छ । यसै बीच मृ तक सोनीको साथिसंग भएको कुराकानीको अडियो सार्बजनिक भएको छ । उनको आफ्नै साथिसंग गरिएको कुराकानी र अडियो तल सुन्न सकिनेछ ।
टोकियो, २७ भदौ- जापानमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । मियागी क्षेत्रमा आज भूकम्प गएको त्यहाँको भू–गर्भ क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।स्थानीय समयअनुसार विहान ११.४४ बजे भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
भू–गर्भविद्हरुले दिएको जानकारीअनुसार जमिनको ४० किलोमिटर गहिराइबाट कम्पन भएको थियो ।अहिले आएको भूकम्पपछि कुनै आँधीको सम्भावना भने नदेखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
यो भूकम्पका कारण कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भएका विवरण पनि प्राप्त नभएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । एसियाको विकसित मुलुक जापानमा भूकम्प धेरै जाने गरेको छ । भूकम्पका कारण हरेक वर्ष धेरै जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ । (रासस)
भर्खरै गएकाे भूकम्पपछि जापानमा यस्तो अवस्था!
कोरोनाबाट मृत्यु भएकि महिलाको शिशुलाई पूर्वमन्त्री बस्नेतले सहयोग गर्ने